एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको खैरेनीमा
ARCHIVE, CORPORATE » एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको खैरेनीमा
एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा देवदह न. पा. ५, खैरेनी, रुपन्देही स्थित खैरेनी शाखाको आइतबार फाल्गुन ६ गते एक समारोहका बिच देवदह नगरपालिकाका मेयर श्री हिरा बहादुर खत्री ज्यूबाट विधिवत् समुद्घाटन सुसम्पन्न भयो ।
शाखा सञ्जाल, पूँजी संरचना, वासलातको आकार, ग्राहक संख्याहरुको आधारमा एनआईसी एशिया बैंक निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंकहरु मध्ये एक हो । खैरेनी शाखाको समुद्घाटन सँगै हाल यस बैंकले अधिराज्य भर १७९ शाखा कार्यालयहरु र १७२ एटिएम एवं ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट ग्राहक महानुभावहरुमा सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
प्रकाशित : Monday, February 19, 2018
सहि उत्तरलाई आयोजकले गलत मानिदिएपछि विवादमा ‘को बन्छ करोडपति’, आयोजकको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न !
किस्ताबन्दीमा बाइक किन्दै हुनुहुन्छ ? होसियार ! तपाईं पनि यसरी फस्नुहोला नि ! (भिडियो रिपोर्ट)
किरियापुत्रीलाई भेट्न गएका मन्त्रीको गलामा माला ? कता जाँदैछ हाम्रो मानवीय संवेदना ? (फोटो)
'रेप केस'मा पक्राउ परेका एनआइसी एशियाका ब्रान्च मेनेजर 'सस्पेन्ड', बैंक भन्छ, 'आरोप पुष्टी नभए उहाँ बैंक फर्कनुहुन्छ'